Marketplace Integrations - Propars E-export neAmazon, Ebay, Allegro uye Etsy
Global Musika Kubatanidzwa
Uyai nekutengesa e-commerce pamwe chete mune rimwe jira uye uzviite zvoga!
Kubatanidzwa kwe ERP
5 Nyika Musika
France Musika (Munguva pfupi)
Germany Musika (Munguva pfupi)
America (Munguva pfupi)
Global (Kuuya munguva pfupi)
ERP / Accounting Chirongwa
Kana iwe ukatengesa zvigadzirwa muchitoro chako painternet, iwe uchawana mari yakawanda. Ehe. Munhu wose anoziva izvi ikozvino. Varidzi vezvitoro vakatadza kufambirana nenguva vakati “Mashopping akavhurwa, internet yakauya, vatengesi vakanyangarika” vakatanga kuona kuti hapana imwe sarudzo kunze kwekungopinda painternet mumwe nemumwe. Uye zvechokwadi, internet uye kutengesa online ndiyo muponesi wako. Vamwe venyu vanogona kushatirwa neizvi voti, "Zvabvepi izvi, kutengesa painternet, e-commerce, ini handizive chii ...". Kunyangwe uchizvida kana kusazvida, e-commerce ndiyo yega nzira yekupona uye kuwana yakawanda. Unobvunza kuti sei? Nekuti mamirioni evatengi vari kure mamaira, vasingakwanise kupfuura pamberi pemusuwo wechitoro chako, vari kusefa internet mazuva ese. Kana iwe uine chitoro painternet, mamirioni evatengi vasingachakwanise kusiya internet nekuda kwemafoni akangwara vari kufamba vachitenderera pamusuwo wechitoro chako painternet kakawanda. Mumazuva mashoma, unozviwana uchigadzirira maodha eSivas, Ankara uye kunyangwe misha isingaendi mitoro. Zvinoenderana nenhamba dzePropars, chitoro chisingaite e-commerce uye chine avhareji yezvigadzirwa zve500 chinowedzera mari yacho ne35% mumwedzi mitanhatu mushure mekutanga e-commerce. Uyezve, iyi ndiyo chiyero chakaderera chinozivikanwa. Kune vakawanda vakabudirira. Mazhinji emakambani anotanga e-commerce anotanga kugamuchira gumi-1 maodha pazuva mukati memwedzi 2-10 kana vakasaita chikanganiso chakakonzerwa navo. * Vatengi vepamhepo vakanyanya kunaka kupfuura avo vanouya kuchitoro chako. Vanokupa zvibodzwa zvakakwirira pavanogamuchira odha yako, iyo yaunotakura zvakanaka uye kutumira mumazuva 15-1; vazhinji vavo havatarisiri zvakawanda; Kuita zvishoma nekukurumidza uye kunyorova kwakaringana kwavari. Usarambe e-commerce. Huya utange kutengesa zvigadzirwa muchitoro chako online, wedzera mari yako uye purofiti.
Zvakanaka, chii chiri chigadzirwa painternet?inotengeswa here?
kutengesa zvigadzirwa painternet pane nzira mbiri:
Vaka webhusaiti uye tengesa zvigadzirwa zvako kubva ipapo,
N11.com, zviri kuenda, Hepsiburada.com Kuve nhengo yemasaiti sekuvhura chitoro nekutengesa zvigadzirwa.
Zvivakire saiti uye tengesa zvigadzirwa:
Kana iwe uchangotanga mu e-commerce, iyi ishoma yenzira yakaoma kwauri. Nekuti kune mamirioni emasaiti painternet, zvinoreva kuti une mamirioni evanokwikwidza. Nhasi, hazvisi nyore kumisikidza uye kubata webhusaiti, kukwidziridza SEO, kukwirisa kumusoro panzvimbo dzekutsvaga seGoogle. Zvinodhurawo. Zvinoda kugovera bhajeti rekushambadzira uye kubhadhara makambani mazhinji kana nyanzvi. Nekuti kana webhusaiti yako isiri mobile-hushamwari, haina yakanaka uye yakabudirira dhizaini, kana kana isina chinzvimbo chepamusoro muGoogle, zvinosuruvarisa, haishande. Panzvimbo pekuita mari yakadai uye mari paunotanga e-commerce, tanga neiri nyore kutanga. Saka imwe sarudzo. Ehe, iwe unofanirwa kuve neyakakosha saiti yako, isu tiri muzera remazuvano izvozvi. Asi iwe uchiita yako e-commerce zviri nyore neyechipiri sarudzo uye uwane mari, iwe uchatarisira yako saiti nekufamba kwenguva.
Kutengesa zvigadzirwa pamasaiti akadai seN11, Gittigidiyor:
Heino nzira iri nyore uye isingadhure yekutanga e-commerce. Kune nzvimbo ina huru muTurkey kwaunogona kupinda uye kutengesa zvigadzirwa. Tinodzidaidza kuti iwo mana makuru pakati pedu: •N11.com •Gittigidiyor.com •Hepsiburada.com •Sanalpazar.com Mazhinji emasaiti aya anoshambadza painternet nepaterevhizheni aine mabhajeti makuru kwauri uye anokwezva mamirioni evatengi. Mune mamwe mazwi, mamirioni evatengi vanoshanyira aya masaiti mazuva ese. pakugadzirira, zvisingadhuri ndakakumirira. Zvese zvaunofanirwa kuita kuve nhengo yemasaiti aya uye kuvhura chaiyo shopu. Iyi inzira isingadhure kana ichienzaniswa neimwe sarudzo. Vanokubhadharisa komisheni paunenge uchitengesa, uye imwe inoda rendi yechitoro; asi nhamba dzacho dzakanaka chaizvo. Ngatisvike papfundo guru. Mushure mekuvhura chitoro pane aya masaiti, iwo ekare matambudziko e-commerce anotanga. Iwe unofanirwa kutumira a ad yechigadzirwa chimwe nechimwe muchitoro chako; izvo zvinogona kutora mazuva kana uine mazana ezvigadzirwa. Iwe unofanirwa kuona nekukurumidza zvigadzirwa izvo zvisisina muchitoro chako kana mutengesi uye wozvibvisa nekukurumidza. Nekuti kana ukasabvisa chigadzirwa chausina, uye kana odha yakauya yechigadzirwa ichocho, vatengi vanotyora chitoro chako nekuti haugone kuchitumira ipapo. Kana iwe uine mazana ezvigadzirwa, iwe unozoona izvi kazhinji, saka chitoro chako chinodonha zvakanyanya uye chitoro chichavharwa nesaiti. Kana iwe wakavhura chitoro kune mamwe mawebhusaiti, ayo aunozovhura chaizvo kana iwe uchinakidzwa nekuravira kunobereka kwe-e-commerce, kana paine kutengeswa pane imwe yemasaiti, iwe uchafanirwa kushanyira ese masaiti uye kuderedza iyo stock stock. yechigadzirwa chakatengeswa ne -1. Zvinotora mazuva nemaawa kuti uedze kuita zvinhu izvi zvese nemawoko pane kutarisisa kugadzirira odha. Iwe unozopedza maawa pakombuta sezvaunofanirwa kukurumidza kupindura kune inouya vatengi mameseji. Uye iwe uchaona akawanda ekare e-commerce matambudziko sezviuru zvevamwe vatengesi.
Asi usanetseka. nokuti kusangana kune chinhu chakadaro.
Chii chinonzi Marketplace Integration?
Kubatanidza zvinoreva kubatanidza mapuratifomu maviri anoshanda. Chimwe chezvinhu zvinoshanda pano iPropars trade management chirongwa; imwe yacho ndeimwe yemasaiti akaita seN11 kana Gittigidiyor. p muProparAzar nzvimbo kubatanidzwa pane. Mune mamwe mazwi, Propar N11 inosanganiswa nenzvimbo dzemusika dzatakataura, dzakadai seGittigidiyor, ndiko kuti, yakabatana nayo pachayo, ndiko kuti, inoshanda yakabatana. Propars vane kubatanidzwa kwemusika Nekubatanidza kune aya mawebhusaiti, inokuitira iwe basa rakaoma rese. Chikumbiro kubatanidzwa kwemusika ndizvo zvazvinoreva: Kubatanidza nekuita basa nePropar! Kana iwe ukashandisa Propar, iwe unozotanga kurodha chinyorwa chako chechigadzirwa kuPropar nerubatsiro rweXML kana Excel faira. Rondedzero yechigadzirwa chako ichasanganisirawo mazita, mastock code, huwandu hwemasheya, ruzivo rweruzivo uye tsananguro yezvigadzirwa. Mushure mezvo, Propars ichaita basa rese rakaoma otomatiki uye shandisa ruzivo rwechigadzirwa chawakarodha kuvhura nekuvhara kushambadzira pane ese masaiti, kugadzirisa stock uye zvimwe zvakawanda, uye haufanirwe kushanda.
Chii chinonzi XML? XML imhando yefaira inoita seExcel faira sezvatinoiziva, asi inochengetwa paInternet, kwete pakombuta. Kazhinji, vatengesi vako vachave ne XML. Paunenge uchishandisa Propars, zvakakwana kukumbira XML kubva kune vako vanokupa kune zvigadzirwa zvaunazvo uye zviise kuPropars. Kana iwe usina XML, unogona zvakare kushandisa Excel faira ine ruzivo rwechigadzirwa. Nenzira iyi, ruzivo rwechigadzirwa chako rwunoiswa kuPropars muhuwandu kamwechete. Kana iwe usina huwandu hukuru hwezvigadzirwa, unogona kunyoresa zvigadzirwa zvako chimwe nechimwe kuPropars usati watanga.